Shirka amniga Galmudug oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shirka amniga Galmudug oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb +VIDEO
Magaalada Dhuusa-mareeb ee caasimadda Maamulka Galmudug maanta waxaa lagu soo gabeeyay shirka Amniga degaanada Galmudug, kaasi oo socday muddo Saddex maalmood ah.
Shirkan ayaa intii uu socday waxaa ka qeyb galay Guddiga Amniga Galmdudug, Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka oo uu horkacayay Agaasimaha Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Wafdi ka socday UN-ka oo maanta gaaray magaladaasi.
Intii uu shirkan socday ayaa waxaa looga hadlay ammaanka degaanada Maamulka Galmdudug, sidii Shabaab looga saari lahaa degaanada ay kaga harsan yihiin Maamulka iyo qodobo kale.
Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo warbaahinta la hadlay shirka kadib ayaa sheegay Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka in ay balan qaadeen sidii maamulka ay uga taageeri lahaayeen Dagaalka Shabaab.
“Waxaan leenahay aan garbaha is qabsano si cadowga uu dhexdeen uga baxo, oo Soomaaliya dhan xur u noqoto, shirksan ujeedadiisa waxa weeye in amniga Galmudug la adkeeyo inta xorta ah, inta kale Shabaabka ay heystaana looga saari lahaa”. Ayuu yiri Sheekh Shaakir.
Shirkan ayaa daba scoday shirkii Golaha Amniga Qaranka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasi oo 6-dii ilaa 10-kii bishan socday, ayna ka qeyb galeen Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Maamul Goboleedyada, oo ay ka soo saareen qodobo dhowr ah.